အခြောက် ဆိုပြီး နစ်နစ် နာနာ ဝေဖန်သူတွေ ကို အချက် အလက် နဲ့ တိတိကျကျ တုန့်ပြန် လိုက်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် – Let Pan Daily
အခြောက် ဆိုပြီး နစ်နစ် နာနာ ဝေဖန်သူတွေ ကို အချက် အလက် နဲ့ တိတိကျကျ တုန့်ပြန် လိုက်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ” အခြောက်ဆိုလဲ ထမီဝတ်ထားပါလား ဗလကြီးနဲ့ ခြောက်နေတယ်မရှက်ဘူးလား ခဏခဏ အပြောခံရ တယ် Gay ဆိုတာနဲ့ မိန်းမပုံဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကိုပဲ Gay လို့ထင်တဲ့ တောရေအိုင်ထဲမှာ လက်ပစ်ကူးနေတဲ့ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်က အတွေးအခေါ်နဲ့ တောဦးနှောက်တွေကို သမုဒ္ဒရာ ဆိုတာဘာလဲ သိရအောင်ပြပါမယ် ယောင်္ကျားဘဝမြတ်တာကို ဒီလိုဘဝဖြစ်နေတာ ရှက်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြသူများသိဖို့ ယောင်္ကျားစစ်ဖြစ်ပြီး ခိုးဆိုးလုနှိုက် မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ သူတွေ မိန်းမစစ်ဖြစ်ပြီး ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ ယုတ်မာတဲ့ သူတွေကို ယောင်္ကျား စစ် မိန်းမစစ်တွေဖြစ်သော်လဲ မြတ်တယ်လို့ထင်ရင်တော့ တစ်နေ့ အခါ တရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲကြည့်ပြီး ငါဟာ ချီးဦးနှောက်လို့သာ ရွတ်နေလိုက်ပါတော့ LGBT တွေထဲမှာလဲ မကောင်းတဲ့ သူတွေ ဆိုးတဲ့သူတွေရှိပါတယ် တဦးတယောက်ချင်းရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ ပေါ်ပဲ မူတည်ပါမယ် ယောင်္ကျားရော မိန်းမရော LGBTရော အားလုံးရဲ့ ဘဝတိုင်းသည် မြတ်သော အကျင့် နဲ့ သီလ သမာဓိ သစ္စာ တည်ပြီး စိတ်ကောင်းထားရင် လူသားတိုင်းမြတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ”
” ကမ္ဘာကို ကြီးစိုးနေတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အောင်မြင်တဲ့ LGBT celebrity များ, နိုင်ငံရေးသမားများ, စီးပွားရေးသမားများ, အားကစားသမားများဖြေးဖြေး ချင်း ကျွန်တော်ဖော်ပြပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံ မှာလဲ အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ အလှူရေစက်လက်နဲ့ မကွာ လှူနိုင်ကြတဲ့ LGBT တွေအများကြီး ကိုယ်တွေက တော့ အချင်းချင်း သိပေမယ့် ပြည်သူတွေကို ချပြဖို့တော့ ဖဲကြိုးဖြတ်သလို ဖွင့်ပွဲကြီးလုပ်သလို ဖော်ကောင်လုပ်သလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူး မလေ့လာဖူးလို့ LGBT တွေ အကြောင်း မသိတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး မျက်စိပိတ် နားပိတ် တဖက်ပိတ် မူဝါဒနဲ့ ဇွတ်ငြင်း နေတာကမှ ရှက်စရာပါ ”
” ကမ္ဘာပေါ်မှာ LGBTIQ တွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Pride တွေ Rights တွေ Party တွေ Gay travel guide တွေ အကုန်သိရအောင် ကျွန်တော် အကုန် တခုချင်းချပြသွားပါမယ်.. Gay pride အကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ video clip လေးမကြာခင်တင်မယ်.. Edit မပြီးသေးလို့.. Unokkarn & Me facebook page မှာ လဲ LGBTIQ နဲ့ ပက်သတ်တာတွေ တောက်လျောက်တင်ပါပြီ မနှစ်က ကိုယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ ကိုယ်ရှူပ်နေလို့ ဟုတ်တိပတ်တိမတင် ဖြစ်ခဲ့တာ ကျွန်တော့်ရဲ့အမာခံ LGBTIQ လေးများနဲ့ တခြား ချစ်ပရိတ်သတ်များ share ပေးဖို့သာ ပူဆာ ပါရစေနော် ” ဆိုပြီး ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် Cele Zone
အခွောကျ ဆိုပွီး နဈနဈ နာနာ ဝဖေနျသူတှေ ကို အခကျြ အလကျ နဲ့ တိတိကကြ တုနျ့ပွနျ လိုကျတဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျ
ဥက်ကာမငျးမောငျကတော့ သူ့ရဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ” အခွောကျဆိုလဲ ထမီဝတျထားပါလား ဗလကွီးနဲ့ ခွောကျနတေယျမရှကျဘူးလား ခဏခဏ အပွောခံရ တယျ Gay ဆိုတာနဲ့ မိနျးမပုံဖွဈနတေဲ့ သူတှကေိုပဲ Gay လို့ထငျတဲ့ တောရအေိုငျထဲမှာ လကျပဈကူးနတေဲ့ မငျးတုနျးမငျး လကျထကျက အတှေးအချေါနဲ့ တောဦးနှောကျတှကေို သမုဒ်ဒရာ ဆိုတာဘာလဲ သိရအောငျပွပါမယျ ယောင်ျကြားဘဝမွတျတာကို ဒီလိုဘဝဖွဈနတော ရှကျစရာ ကောငျးတယျလို့ ပွောကွသူမြားသိဖို့ ယောင်ျကြားစဈဖွဈပွီး ခိုးဆိုးလုနှိုကျ မုဒိမျးကငျြ့ သတျဖွတျနတေဲ့ သူတှေ မိနျးမစဈဖွဈပွီး ကောကျကဈြစဉျးလဲ ယုတျမာတဲ့ သူတှကေို ယောင်ျကြား စဈ မိနျးမစဈတှဖွေဈသျောလဲ မွတျတယျလို့ထငျရငျတော့ တဈနေ့ အခါ တရာ ကိုယျ့ကိုယျကို မှနျထဲကွညျ့ပွီး ငါဟာ ခြီးဦးနှောကျလို့သာ ရှတျနလေိုကျပါတော့ LGBT တှထေဲမှာလဲ မကောငျးတဲ့ သူတှေ ဆိုးတဲ့သူတှရှေိပါတယျ တဦးတယောကျခငျြးရဲ့ အကငျြ့စာရိတ်တ ပျေါပဲ မူတညျပါမယျ ယောင်ျကြားရော မိနျးမရော LGBTရော အားလုံးရဲ့ ဘဝတိုငျးသညျ မွတျသော အကငျြ့ နဲ့ သီလ သမာဓိ သစ်စာ တညျပွီး စိတျကောငျးထားရငျ လူသားတိုငျးမွတျပါတယျ ခငျဗြာ ”
” ကမ်ဘာကို ကွီးစိုးနတေဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲ အောငျမွငျတဲ့ LGBT celebrity မြား, နိုငျငံရေးသမားမြား, စီးပှားရေးသမားမြား, အားကစားသမားမြားဖွေးဖွေး ခငျြး ကြှနျတျောဖျောပွပါမယျ မွနျမာနိုငျငံ မှာလဲ အရမျးအောငျမွငျတဲ့ အလှူရစေကျလကျနဲ့ မကှာ လှူနိုငျကွတဲ့ LGBT တှအေမြားကွီး ကိုယျတှကေ တော့ အခငျြးခငျြး သိပမေယျ့ ပွညျသူတှကေို ခပြွဖို့တော့ ဖဲကွိုးဖွတျသလို ဖှငျ့ပှဲကွီးလုပျသလို ဖျောကောငျလုပျသလို ဖွဈမှာစိုးလို့ မပွောတော့ပါဘူး မလလေ့ာဖူးလို့ LGBT တှေ အကွောငျး မသိတာဟာ ရှကျစရာမဟုတျပါဘူး မကျြစိပိတျ နားပိတျ တဖကျပိတျ မူဝါဒနဲ့ ဇှတျငွငျး နတောကမှ ရှကျစရာပါ ”
” ကမ်ဘာပျေါမှာ LGBTIQ တှနေဲ့ ပတျသတျတဲ့ Pride တှေ Rights တှေ Party တှေ Gay travel guide တှေ အကုနျသိရအောငျ ကြှနျတျော အကုနျ တခုခငျြးခပြွသှားပါမယျ.. Gay pride အကွောငျး ရိုကျထားတဲ့ video clip လေးမကွာခငျတငျမယျ.. Edit မပွီးသေးလို့.. Unokkarn & Me facebook page မှာ လဲ LGBTIQ နဲ့ ပကျသတျတာတှေ တောကျလြောကျတငျပါပွီ မနှဈက ကိုယျ့ကိစ်စတှနေဲ့ ကိုယျရှူပျနလေို့ ဟုတျတိပတျတိမတငျ ဖွဈခဲ့တာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့အမာခံ LGBTIQ လေးမြားနဲ့ တခွား ခဈြပရိတျသတျမြား share ပေးဖို့သာ ပူဆာ ပါရစနေျော ” ဆိုပွီး ပွောပွ ခဲ့ပါတယျ။
လေးစားစှာဖွငျ့ ခရဈဒကျ Cele Zone